तेस्रो लहरको जोखिम उच्च : यी १० जिल्लामा संक्रमण तिव्र रुपमा बढ्दै, सरकारले दियो यस्तो चेतावनी ! – Sandesh Press
तेस्रो लहरको जोखिम उच्च : यी १० जिल्लामा संक्रमण तिव्र रुपमा बढ्दै, सरकारले दियो यस्तो चेतावनी !
July 26, 2021 455
काठमाडौं, ११ साउन । सरकारले भाइरस संक्रमणको तेस्रो लहर फैलिने चेतावनी दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रमणको जोखिम बढिरहेको भन्दै रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कार्यान्वयनमा हेलचक्र्याइँ नगर्न आग्रह समेत गरेको छ ।
निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै जनस्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउन नसकिरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले सो आग्रह गरेको हो । अहिले पनि नागरिकहरू भौतिक दूरी कायम नै नगरी आवतजावत गरिरहेका छन् । सभा सम्मेलनसमेत शुरू हुन थालेका छन् । विगत १ हप्तायता संक्रमित हुने दर बढ्दो क्रममा रहेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यकासहित धेरै जिल्लामा पछिल्लो समय संक्रमण बढ्दै गएको छ । काठमाडौंसहित ललितपुर, भक्तपुर, मोरङ, सुनसरी, झापा, चितवन, कास्की, रूपन्देही र कैलाली जिल्लामा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या ५०० भन्दा बढी पुगेको छ । २०० भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लाको संख्या २६ पुगेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या २७ हजार ३७५ पुगेको छ ।स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा। समिरकुमार अधिकारीका अनुसार संक्रमणको बढ्दो अवस्थाले चुनौतीपूर्ण तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै अस्पतालका शय्या र अक्सिजन चुस्तदुरुस्त राख्न आग्रह गरिएको छ ।
दैनिक २ हजार ५३१ जना संक्रमित थपिने गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो १ हप्तालाई आधार मान्दा दैनिक २ हजार ५३१ संक्रमित थपिने गरेका हुन् । १ हप्ताको अवधिमा १७ हजार ७१७ संक्रमित थपिएका हुन् ।गत शुक्रवार २ हजार ९३६, शनिवार १ हजार ८७५, आइतवार १ हजार ८०१, सोमवार २ हजार ४४५, मंगलवार ३ हजार १०८, बुधवार २ हजार ८३८ संक्रमित थपिएका छन् । बिहीवार देशभर थप २ हजार ७१४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
Prevशिशिर भण्डारीलाई एक्कासी के भयो ? उनको स्वास्थ्य अवस्था अहिले यस्तो छ, भावुक हुँदै श्रीमती रोईन् (भिडियो हेर्नुस)
Nextमान्छेको शव बैंकको खातामा रहेको १ लाख १८ हजार रुपैया लिन गयो, बैंकका कर्मचारीको उड्यो होस्
सरकारले जारी निषेधाज्ञा ‘मोडालिटी’मा केही परिवर्तन गरी ‘लुजडाउन’ शैली अपनाउने तयारी
लभ परे पछि किन साइको हुन्छ मान्छे ? कारण यस्ता छन्